Dumarka biyaha iska keena iyo dhibaatada Siigada - Cishqi.com
Dumarka Biyaha Iska Keena Iyo Dhibaatada Siigada
Siigada waa sida bunka oo kale, qofka weey qabaneysaa, Hadana In Dumarka biyaha iska keena ay dhibaato kala kulmaan siigada ma ahan wax cusub.
Waxaa jiro dumar fara badan oo biyaha iska keena gaar ahaan dumarka kacsiga badan, waxa ay isugu jiraan kuwo single ah iyo kuwo xaas ah oo aanan loo hagar bixin.
In dumarka biyaha iska keena ay naftoodu qanciyaan waxaa keeno waxyaabo badan oo aan halkaan ku falanqeyn doono.
Aan ku hormarno dumarka biyaha iska keena
Maxaa sababo in dumarka biyaha iska keenaan? Jawaabtu wa mid fudud. Qof walbaa markuu maqlo dumarka biyaha iska keena qaaatan dumarka kacsiga badan, durbaba maskaxdiisa waxaa camiro wax aanan caadi ahayn, wax aanan dadka ku cusbeyn.
In ay dumarka raaxeystaan ama biyaha iska keenaan ma ahan wax cusub, laakin waxaan rabnaa inaan falanqeyno dhibaatooyinka siigada.
Waa maxay Sababaha keeno Siigada?
Dhaqan caado ah
Daawashada filimaanata baashaalka ah
Markuu ninku arko qoftoo jir macaan leh ama uu daawado sawiradeeda, dabcan inuu kacsi yimaado ma ahan wax filanwaa ah.
Sidoo kale gabadhu markeey aragto xabadkoo quruxlow ah, oo dheer misana leh sixback leh of course in ay kacsato waa wax normal ah.
Waxaan meesha ka marneyn ninka iyo naagta isqabo. Markuu midkood haaf yahay, kann kalena uusan aqoonin sida sheekadu loo soo gabagabeeyo, dabcan siigada waa imaaneysaa.
Tusaalaha koobaad: Dumarka biyaha iska keena
Deeqo waa xaas, waana xaas aad u dareen badan laakin ninkeeda Negeeye ma ahan mid sariirta ku fiican, waa nin kaligii raaxeyste ah, markuu biyo baxo, wuu ka degaa kadibna tii hurdo ahayd ayaa u timaado.
Negeeye isma weydiiyo, xaaskaaga ma biyo baxday mise weli waa kuu baahan tahay. Si kastaba ha noqotee Negeeye wuxuu Deeqo ka dhigaa mid haaf ah, wuxuu ku baajiyaa macaanida raaxada.
Maxay sameyneysaa Deeqo? Jawaabta macquulka: Weey siigeysaneysaa, waxa ay leedahay baacaan, adigaa guursaday ee gacantaada biyaha isaga keen. Qabyo naagteedaa dhameystirto.
Markaas oo kale waxaa fiican in Deeqo ay adeegsato qaabab fara badan oo Raga dareenkooda loo kiciyo si ninkeeda uu u dareemo in ay kacsi badan tahay. Erayadaasi waxaa kamid ah erayada aan halkaan ku diyaarinay: Erayada raga ay jecelyihiin.
Tusaalaha labaad: Raga biyaha iska keena
Hanad waa nin naago jecel gaar ahaan wuxuu xiiseeyaa kuwa kuuntada macaan leh. Markuu kuunto arko waxaa ku soo dego qalal, derbiyada ayuu isku garaacaa. Kaaga daran tuu arkaba wuxuu jecelyahay inuu ka suro.
Waxyaabaha la yaabka leh waxa ay tahay waa doob weligiis maba dhadhamin baahasha. Mid walbaa uu raboodo lama hadli karo oo maba yaqaano sida dumarka loo shukaansado.
Intuu ku hurayaa Hanad inuu iska siigeyso, iskana niyeysto xabada ugu jirka macaan leh markuu biyo baxayo? Waxna, laakin ma ahan wax qurux badan oo la sameeyo.
Siigada dhan walbaa weey u xun tahay, ha fiirin oo kaliya shanta daqiiqo ee waalida casaanka ah.
Dhibaatada Siigada Dumarka ay kala kulmaan
Siigadu waxa ay dumarka biyaha iska keena u leedahay dhibaato fara badan hadana weey ku adag tahay in ay joojiyaan. Maxaa yeelay waxa ay u tahay balwad, waxaa waalayo kacsi aan caadi ahayn.
Qofka markuu siigo barto waxaa gebi ahaanba adkaaneyso inuu joojiyo. Dumrka biyaha iska keena ayaa inta badan isticmaalo farta.
Macno ahaan gabadhu in ay farteeda adeegsato si ay biyaha isaga keento una dejiso dareenkeeda kacsan. Isticmaalka siigada farta ayaa dumarka biyaha iska keena u keento dhibaatooyin badan.
Dumarka qaar kuma sinno farta oo kaliya ee waxa ay sidoo kale isticmaalaan, mooska iyo alaabo kale oo caag ka sameysan kuwaasoo mustaqbalka u keeno dhibaato xoogan.
Dr Martin oo ah nin ku taqasuusay xanuunada haweenka kuna nool dalka Jarmalka ayaa sheegay, in dumarka biyaha iska keena qaasatan kuw aadeegsado fartooda iyo waxyaabo lamida ah ay dhibaato weyn kaga timaado siigada.
Dumarka biyaha iska keena ma adeegsadaan mooska oo kaliya ee sidoo kale waxa ay isticmaalaan caaagag ka sameysan baahalka raga ee taraanka.
Dr Martin oo sidoo kale xusay in ay ku qasabto arinkaasi waxyaabo dib udhigi kara nolasha qofka dumarka ah.
Dumarka biyaha iska keenoa ayaa waxa ay kala kulmaan siigada dhibaatooyin badan waxaana kamid ah in gabadhu ay u ekaato sida qof bikro jabtay oo kale. Iyadoo aanan is ogeyn islamarkaana dareento mar dambe.
Gabdhaha qaar waxay adeegsadaan qalin ama wax la mid si ay ugu xoq-xoqaan dibnaha farjiga gaar ahaan kintirka taas oo ay ka helaan raaxo macaan kadibna ku biyo baxa balse waxaa jira dhibaato xoogan oo soo gaarta xubinta taraanka ee qofkaasi.
Dhibaatooyinka ugu badan ee la soo derisaan dumarka biyaha iska keena ayaa ah in haweeneydu ay ka hortimaado guur ama galmada raga misana halkaas ku ahaato qof bilaa mustaqbal ah, bilaa caruur ah kuna gabowdo doobnimo. Taasna ma ahan wax fiican.
Waxaa sidoo kale laga yaabaa in gabadhu ay ka qaado cudur ama infection kaasoo ku faafo xubinta tararnka.
Daraaasaad la sameeyay waxa lagu ogaaday in 60% haweenka aduunka ay isticmaalaan ama aay biyaha isaga keenaan alaab geedka u eg oo mararka qaarkood aad u maleyso geedkiyoo inta taagan.
Iyadoona sidoo kale dumarka Soomaaliyeed intooda badan ay isticmaalaan gacanta ama farta taasi oo laga yaabo in sanadaaha soo socda ay soo ifbaxaan dhibaatooyin soo gaaro dumarkaasi.
Dhibaatooyinka kale ee ay siigada leedahay
Aragaa indhahaaga oo daciifa.
Maskaxda oo fahankeedu noqdo mid daciif ah.
Mustaqbalka waxbarasho oo aad ka caajisto.
Buuq badan oo maskaxda ah.
walwal iyo murugo badan.
Jirkaaga oo daciifa.
Daal iyo tabar yari joogto ah.
Xanuuno ku dhaco lafaha sida in lafahaagu qac qac ka yeerto.
Geedka ninka oo daciifa.
Biyo bax deg deg ah.
Waan dareemi karnaa in siigadu ay macaan tahay balse isku day inaad joojiso. Ka taxadir caafimaadkaaga iyo mustaqbalkaaga. Waa dareemi karnaa in dumarka qaarkood aysan ragooda taa ka qancin misana aysan u sheegan karin dareenkooda. Si kastaba ha ahaato inaad siigeysato ma ahan wax qurux badan.
Qoraa: Cumar Raaxeeye – Cishqi Team
Raaxada dumarka fircooniga ah iyo Gudniinka
Xijaabka Iyo Quruxda Dumarka 2021
Dumarka Kacsiga Badan: Sidaan Maku Aragtay Xaaskaaga?